ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဟုတ် MSVCP110.DLL - ပြဿနာကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လို - ဆောင်းပါးများ - 2019
သင်သည်မည်သည့် program ကို run နှင့်ထို့ထက် ပို. ဆိုပါက - ဥပမာအားကစားနည်းများ, Battlefield4နဲ့မြန်နှုန်းပြိုင်ဘက်များအတွက်လိုအပ်ကွန်ပျူတာ msvcp110.dll ပါဘူးသို့မဟုတ် "လျှောက်လွှာသောကွောငျ့စတင်ရန်နိုင်ခြင်းကြောင့်, သငျသညျ, ထို program ကို run မရနိုင်သည်ကိုဖျောပွတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုကြည့်ရှု MSVCP110.dll "မတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်, ကသင်ဘယ်မှာဖိုင်ကိုနှင့်အဘယ်ကြောင့် Windows ကိုကမတည်ရှိပါဘူးကြောင်းသတင်းပေးပို့ကိုရှာဖွေ, ရှာကြသည်ကိုခန့်မှန်းရန်လွယ်ကူသည်။ အမှားက Windows 8, Windows7ကိုမှာသူ့ဟာသူကိုထင်ရှားစွာပြအဖြစ်ချက်ချင်းကို Windows 8.1 ဖို့အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်နိုင်ပါတယ်။ ငါက Windows 7, Windows 8 ကိုမရရှိနိုင်ပါအမှား Msvcp140.dll fix, 10 ဘူးဘယ်လို :. ကိုလည်းရှုပါ။
ငါကထားသောစာပိုဒ်တိုများဒီစိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်အခမဲ့ msvcp110.dll သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကို download လုပ်ပါတဲ့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သို့ဝငျမလိုအပ်ကြောင်းသတိပေးချင်တယ်: ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုနှင့်အတူ, သင်အပြည့်အဝကိုသင့်ကွန်ပျူတာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်သေချာပေါက်လုံခြုံမဟုတ်, သင်လိုချင်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မှန်ကန်သော "ဟုအဆိုပါကွန်ပျူတာပေါ်မှာ msvcp110.dll ကတည်းက Run ကိုမဖြစ်နိုင်, မ" အမှားဆုံးလမ်း (အဘယ်သူမျှမက install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုဖိုင်, ပစ်ခြင်းငှါအဘယ်အရပ်အဘို့အကြည့်ဖို့လိုအပ်, နှင့်ဤ၌စိတ်ဝိညာဉ်အားအားလုံး) တွေအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူ, သင်လိုအပ်သမျှတရားဝင်မိုက်ကရိုဆော့ဖက်ဘ်ဆိုက်ကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်က်ဘ်ဆိုက်ကနေ download လုပ်ပါနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install Msvcp110.dll
တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချအရင်းအမြစ်မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လုံးဝအခမဲ့နိုင်ပါတယ်သောမိုက်ကရိုဆော့ဖ Visual Studio အစိတ်အပိုင်း (Visual Studio 2012 မှပြန်လည်ခွဲဝေမှု Visual C ++ Update ကို 4) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု - - မိုက်ကရိုဆော့ဖ //www.microsoft.com/ru-ru/download site ကို msvcp110.dll ဖိုင်ပျောက်ဆုံးနေ /details.aspx?id=30679
Update ကို 2017: အဆိုပါအထက်စာမျက်နှာတစ်ခါတစ်ရံတွင်ရရှိနိုင်ပါ။ ဆောင်းပါးထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း C ++ တို့ပြန်လည်ခွဲဝေမှု packages များ Download အဆိုပါ Visual ယခုဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ပါသည်: မိုက်ကရိုဆော့ဖထံမှ Visual C ++ ပြန်လည်ခွဲဝေမှုကို download လုပ်ပါနည်း။
ရိုးရှင်းစွာအက, installer ကို download လုပ်ပါလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်ကွန်ပျူတာကို restart ချလိုက်ပါ။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါသင်နည်းနည်းစနစ်များ (x86 သို့မဟုတ် x64) ကို select ဖို့လိုအပ်လျက်, installation ပရိုဂရမ်ကိုသင်က Windows 8.1 ကို Windows 8 နဲ့ Windows7အတွက်လိုအပ်သမျှတပ်ဆင်ပြီး။
မှတ်ချက်: အကယ်. သင်သည် 64-bit system ကိုရှိပါကသင်ချက်ချင်းအထုပ်နှစ်ခုဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းသင့်ပါတယ် - x86 နဲ့ x64 ။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်: ဆိုတဲ့အချက်ကို 32-bit နဲ့, ဒါပင် 64-bit နဲ့စနစ်များအတွက်အများဆုံးအစီအစဉ်များနှင့်ဂိမ်းများသူတို့ကိုဖွင့်ဖို့ 32-bit နဲ့ (x86) ၏စာကြည့်တိုက်ရှိသည်ဖို့လိုအပျကွောငျးဖြစ်ပါတယ်။
Battlefield အတွက် msvcp110.dll အမှားဆုံးမခြင်းအကြောင်းဗွီဒီယိုညွှန်ကြားချက် 4
msvcp110.dll အမှား Windows 8.1 အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် အကယ်.
ထို program တစ်ခု update ကိုများနှင့်ဂိမ်းအဖြစ်မကြာမီကရပ်တန့်အဖြစ်, ပုံမှန်အားဖြင့်စတင်သည်, သင် program ကို run မရနိုင်သည်ကို error message ကိုကြည့်ရှု, သင်လိုချင်တဲ့ဖိုင်ကိုမရရှိနိုင်ခဲ့လျှင်အောက်ပါကြိုးစားကြ:
Panel ကိုထိန်းချုပ်ကိုသွားပါ - Programs ကို Add သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပါ။
သည် "Visual C ++ ပြန်လည်ခွဲဝေမှုပက်ကေ့" Remove
Microsoft ရဲ့ website နှင့် Re-install စနစ်ကနေ Download လုပ်ပါ။
မှတ်ချက်: မည်သည့်ကိစ္စတွင် Visual Studio 2013 //www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=40784 များအတွက် Visual C ++ အထုပ်တစ်ဦးကိုကိုးကားအဖြစ်ပေးစေခြင်းငှါ, ရသောအခါအလားတူအမှားများလွန်းဥပမာ, အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုငျသညျ, ပျက်ကွက် msvcr120.dll ။
ဗီဒီယို Watch: Fortnite missing resolve fix, "READ DESCRIPTION" (အောက်တိုဘာလ 2019).